Baomba lakrimôzena sy fisamborana no setrin’ny hetsika fanoherana am-pilaminana ny hosoka sy hala-bato tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, araka ny baikon’ny praiminisitra Ntsay Christian tany amin’ny Prefektora…
Fanehoana ireo porofo maneho ny fisian’ny hala-bato sy hosoka faobe tamin’ny vahoaka nandritra ny fihodinana faharoa tamin’ny alalan’ireo solaitra elektronika no nokasain’ny KMMR sy ny “Legal Team” natao omaly tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai ankoatra ny fifampiarahabana tratry ny taona 2019, araka ny nambaran’ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa, kinanjo baomba lakrimôzena sy fisamborana no setrin’izany. Ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny Prefektoran’ny tanàna moa no voalazan’ireo mpitarika ny hetsika ho nanome izany baiko izany. Vokany, nisy ireo voasambotra ary nisy koa ireo naratra avy amin’ireo vahoaka manohitra ny hosoka sy hala-bato.
Nanambara ny KMMR sy ny “Legal Team” fa mitohy, ary tsy hihemotra manoloana ireny zava-nitranga omaly ireny ny hetsika ho fanoherana ny hosoka sy hala-bato etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, ary tsy maintsy ho ampahafantarina ny vahoaka avokoa ireo porofo rehetra mikasika izany.
Noho ny fisian’ireo solaitra elektronika miisa telo teo amin’ny “parvis” no voalaza fa antony nahatonga ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny Prefektoran’ny tanàna nanome baiko ireo mpitandro filaminana nandrava ilay hetsika. Vaky bantsilana teo avokoa mantsy ireo hosoka sy hala-bato nitranga nandritra iny fihodinana faharoa iny, ka dia natao hatramin’ny farany izay tsy nahatanteraka izany hetsika am-pilaminana izany.
Tsy manan-jo hahafantatra sy hahita ireo porofo mikasika ireo hosoka sy hala-bato ve ny vahoaka? Mipetraka tokoa izany fanontaniana izany ankehitriny satria raharaham-pirenena no resaka. Tsy manan-jo haneho hevitra ve ny vahoaka kanefa ny MAPAR indrindra no nidradradradra izany fony fitondrana Hery Rajaonarimampianina ary vokatry ny hetsika an-dalambe teny amin’ny kianjan’ny 13 May no nahazoan’ny MAPAR nanendry ny praiminisitra Ntsay Christian, ny minisitry ny Atitany, Jono ary ny Fanajariana ny Tany? Izao sahady ve dia efa nalàna teo am-pelatanan’ny vahoaka izany fahalalahana maneho hevitra izany?